स्क्रिन अघि धेरै समय बस्नु घातक, जोगिने कसरी ? - जीवन शैली - प्रकाशितः जेष्ठ ११, २०७७ - नारी
स्क्रिन अघि धेरै समय बस्नु घातक, जोगिने कसरी ?
दिवस थापा ( आईटी इञ्जिनियर )
जेष्ठ ११, २०७७ जारी लकडाउनको समयमा धेरैले टिभी, मोबाइलवा ल्यापटपको स्क्रिन गरेर समय बिताउने गरेका छन् । जसकारण धेरैमा अनेकखाले स्वास्थ्य समस्या देखिनथालेको छ । कतिपयलाई स्क्रिन हेर्न छाड्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने वा जिउभारी हुने समस्या देखिएको बताइएको छ । त्यसैले यसबारे सबै सचेत हुनआवश्यक छ । र सावधानीका उपायअपनाउनु जरुरी छ ।
हामी स्क्रिनमा घण्टौ समयबितेको पत्तै पाउँदैनौं । परामर्शदाता मनोचिकित्सक तथा नाइटिबभिगेल अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य इकाईका टेक्नोलोजी विशेषज्ञ डा.काबल नगका अनुसार एकपटक स्क्रीनमा एक घण्टा भन्दा बढी समय खर्च नगर्नुहोस् । प्रतिघण्टा १० मिनेट ब्रेक लिनु लाभदायक हुन्छ । किनभने कम्प्युटरमा लामो समयसम्म काम गर्दा तपाईंको आंखा स्क्रिनले तान्न सक्छ, टाउको दुख्ने र आंखा बेचैन गराउने जस्ता समस्या आउंछन् । यहीं कुरातपाईको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ । ब्रेक लिएर त्यस्ताउपकरण प्रयोग गर्दा धेरै हद समस्याको समाधान हुन्छ ।
२. ट्रिगरहरू पहिचान गर्नुहोस्
जब समस्याका लक्षण देखापर्छन् तब मात्रै हामी फोन, ट्याबलेट वा टिभीबाट टाढा हट्न चाहन्छौं । कहिलेकाही तपाईं स्वचालित रूपमा यसमा जान चाहानुहुन्छ र तपाईंको उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो एक बानी हो । त्यसबाट बँच्न, तपाईका ट्रिगरहरू (उत्तेजना वा कुनै प्रकारको अशान्ति) पहिचान गर्नुहोस् । सान्त्वनाका लागि पर्दामा जानुको सट्टा, बिषय के हो भनेर कसैसंग छलफल गर्नुहोस् । यस बारे लेख लेख्नुहोस् वा वैकल्पिक कुनै उपाय खोज्नुहोस् ।
३. स्क्रिन समय योजना अर्थात् तालिका बनाउनुहोस्
योजना बनाएर स्क्रिन अघि बस्नुहोस् । बिहानको समय आफ्नो स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुहोस् । सुत्नुअघि एक घण्टाअघि नै स्क्रिनबाट टाढा रहनुस् । सकेसम्म मोबाइलमा अलार्म नराख्नुस् ।
४. वैकल्पिक तरिका खोज्नुहोस्
चाहे जुम, फेसटाइम, स्काइप कल वा हाउस पार्टी (भिडियो कलिंग हाम्रो प्रियजनहरूलाई आजका दिनहरूमा देख्न सक्ने मात्र एक तरिका हो)। बाहिरफेर पुग्नु पर्दा बाहिर रहनु हो । अर्को व्यक्तिले बोलेको सुन्नका लागि सामान्य फोन कल राम्रो उपाय हुनसक्छ ।
५. स्क्रिन बिनाका शारीरिक गतिविधिहरु
सकेसम्म स्क्रिन बिनाका गतिविधिमा जोड दिनुहोस् । जस्तैः सरसफाई, बगैंचा सरसफाई, खाना बनाउने, कपडा धुने लगायत । यसले हामीलाई स्क्रिनसँग टाढा रहँदै स्वस्थ्य रहन सहयोग पु¥याउँछ ।
प्रस्तुतिः लक्ष्मी भण्डारी